Shir lagu taageerayo maaamul u samaynta gobolada Jubooyinka oo maanta Magaalada Perth lagu qabtay.
Dec 9, 2012 (QOL) Magaalada Perth ee xarunta Galbeedka Australia ayaa maanta lagu qabtay shir balaadhan oo lagu taageerayo maamul u samaynta Juboland, shirkan oo ay soo qabanqaabiyeen Jaaliyada Jubaland ee Galbeedka Australia waxaa ka soo qaybgalay bulshada qaynaheeda kaladuwan sida, Culimada, Odayaasha,Haweenka & dhalinyarada.
Shirka oo jawi aad u qurix badan ku bilowday waxaa ugu horayn lagu furay Aayadah Quráanka Kariimka ah & wacadi kooban oo Alle cabsidiisa la isku baraarujinayay, kadib waxaa shirka si rasmi ah u furay gudigii shirkan soo qabanqaabiyay oo dadkii kulanka ka sooqayb galay si aad ah u soo dhaweeyay una mahad celiyay.
Gudiga qabanqaabadu waxay saharaax ka bixiyeen ujeedadii shirkan loo qabatay waxayna sheegeen bulshadan kulankan isugu timid in ay doonayaan in ay taageeraan Maamul Goboleedka Jubaland loo samaynayo & in ay talooyin u gudbiyaan Madaxada Soomaaliya, shirka waxaa ka hadlay aqoonyahano, Odayaal, haween & dhalinyaro dhamaantoodna waxay tilmaameen in ay taageerayaan Maamul goboleedka Jubaland oo ah maamul dadka deegaanada Jubooyinku xaq ay u leeyihiin.
Dhamaan dadkii shirka ka hadlay waxay sheegeen in ay guud ahaan Dawalda ku taageersanyihiin talaabooyinka horu maarka leh ee ay ka gaadhay xaga amniga waxayna si gaar ugu mahada celiyeen ciidamada Soomaliyeed ee Kismaayo amaankeeda gacanta ku dhigay waxayna cadeeyeen in ay ka goántahay taageerida ciidamadaas & guud ahaan horu marinta Jubaland.
Odayashii shirk ka hadlay waxay baaq culus u direen dawlada Faradaalka Soomaaliya waxayna ka codsadeen in ay sida ugu haboon uga qaybqaadato maamul u samaynta sadexda Gobol ee Jubada Hoose, Jubada dhexe & Gedo, Odayaashu waxay Madaxweyne Xassan Sheikh Maxamuud ka codsadeen in uu meelmariyo himilooyinka qaran isla markaasna uu Dastuurka oo cadaalada loo cuskanayo umada Soomaaliyeed ku hogaamiyo iyagoo xusay in dadka Jubooyinka ka muuqato kalsooni la’aan dhinaca Dawalada ah.
Dadkii shirka ka hadlay waxay dhaliil u jeediyeen xildhibaanada Gobolada Jubooyinka u dhashay ee ku jira Baarlaanka Soomaliya waxayna ku dhaliileen in aysan si firinfircoon uga muuqanin saaxada siaaysada waxayna ku adkeeyeen in dadka ay matalayeen u hagarbaxaan una hadlaan islamarkaasna ka qayb qaataan dhismaha maamulka Jubaland.
Dadkii shirka sida qiirada leh uga hadlay waxaa ka mid ahayd Maamo Mako Mohamed Shirwac oo sheegtay in umada Soomaaliyeed ay cadaalada u wada oomanayntahay islamarkaasna aysan dadka Jubooyinka qaadan Karin in la yidhaahdo maamul ma samaysan kartaan.
Maamo Mako waxay dawlada fadaraalka Soomaaliya ka codsatay in ay Maamul u samaynta Jubaland gacan weyn ka gaysato dadka deegaankana ay u madaxbanayso in ay maamul samaystaan, waxay intaas raacisay in dadka Jubaland ay gacmaha is qabsadaan isuna taagaan in ay maamul cadaalad ku dhisansamaystaan dhexdoodana ay isu cadaafal falaan.
Ugu dambayntii waxay dadkii shirka ka hadlay tilmaameen dadka Jubooyinku in ay yihiin dad dhaqan wanaagsan oo nabada & wada noolaanshaha jecel waxayna dadka deegaanada Jubooyinka ugu baaqeen in ay soo celiyaan wanaagii lagu yaqaanay & habkii dhaqan ee ay caanka ku ahaayeen oo la aaminsanyahay in uu waxweyn ka tari karto isla markaasna uu fududeyn karto samaynta maamul loo dhanyahay oo gobolada Jubooyinka yeeshaan.